Ufisa ukushiya isifundo emantombazaneni
UFUNDE okuningi kwabesifazane asebenamava asebenze nabo ngesikhathi kuqoshwa umdlalo avelele kuwo umlingisi osemncane odlondlobala ngesivinini.
Bongiwe Zuma | February 17, 2021
ULungelo Mpangase, odlala indawo kaNtokozo, emdlalweni omusha osihloko sithi Mzali Wami, uxwayisa amantombazane asemancane ngokubaluleka kokungathatheki kalula. ULungelo usho kanje kulandela indawo ayilingisa kulo mdlalo, ekhuluma ngokuntshontshwa nokuthunjwa kwamantombazane asuke efuna umsebenzi namathuba angcono.
Kulo mdlalo ubone kulula ukulingisa kuwo le ndawo ngenxa yabesifazane abesebenza nabo eduze kwakhe. Le ndawo kaNtokozo, uthe yehlukile kwezinye izindawo ake wazilingisa futhi imkhulisile ngoba ikhuluma ngemvelaphi, isintu nezimo zempilo.
"Asizifundise ukucwaninga ngoba baningi abantu abaqolayo. Ubizwe sengathi ubizelwa umsebenzi kanti usuyodayiswa. Ikakhulukazi uma uya endaweni ongakaze waya kuyo, thola umuntu ozokuphelezela, ungalokothi uhambe wedwa. Sibhekene nesikhathi esinzima, amantombazane ayathunjwa," kusho uLungelo. Kwenzeka lokhu nje abantu abaningi bake bazwelana naye ngesikhathi esengozini yemoto nokwenza bamsabela ukuthi kungase kuphele ngekhono lakhe lokulingisa.
ULungelo uveze ukuthi ukholelwa ukuthi le ngozi yayingehlela nanoma ubani kodwa kukhona konke ubonga ukuthi wasinda wabuya wakwazi nokuqhubeka nekhono lokulingisa.
Kuningi azibekele kona kulo mkhakha ngoba noma enza kahle ekulingiseni kodwa unamaphupho amakhulu njengoba ngelinye ilanga efisa ukudlala phambili emidlalweni emikhulu yaphesheya kwezilwandle eHollywood. Ngaphandle kwalokhu, ufisa nokwenza eminye imsebenzi engekho emehlweni abantu kodwa ephathelene nokulingisa. Ukubhala imidlalo yethelevishini ngezinye zezinto eziphambili ezinhlelweni zakhe njengamanje.
Ephetha, uthe kuningi okusazobonakala ngendawo ayidlalayo ngoba kusazovela ubuqili obuhambisana nokwethemba umuntu nokuzoshiya isifundo kubantu abaningi. Uyafisa ukuthi izingane zamantombazane zivule amehlo, zibhekisise konke okwenzeka kulo mdlalo ngoba kuningi abazokufunda nokuzobasiza empilweni. Ukuba nomsebenzi ngesikhathi amaciko amaningi eNingizimu Afrika ebhekene nesikhathi esinzima seCovid-19, uthe kuyamthobisa futhi ukuthatha njengento eyisibusiso.
"Ngijabule ngendlela eyisimanga, ngibonga lona ithuba lokuthi ngisebenze ngesikhathi esinzima sokuhlasela kweCorona. Umsebenzi uyantuleka, ukusebenza ngiphinde ngithole indawo ephambili kungijabulisile. Ngisebenze nabalingisi esebenamava nezindondo kungijabulise kakhulu," kusho uLungelo.